Ulążki17 - indlu elunxwemeni lwechibi, intliziyo yeenkuni - I-Airbnb
Ulążki17 - indlu elunxwemeni lwechibi, intliziyo yeenkuni
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguKlementyna
Indawo efanelekileyo kubathandi bendalo.
Iimeko ezigqibeleleyo zokuloba, ukuqubha, ukukhwela iphenyane okanye ukuma ngokubhexa, ukubaleka okungapheliyo kunye neendlela zokuhamba kunye neendlela zebhayisekile ezijikeleze indlu. Ebusika, ichibi elinomkhenkce, elimalunga neemitha ezingama-20 ukusuka kwindlu, limema abatyibilizi.
Kwabo bathanda iindlela zokuphumla ezingaceli mngeni ngokwasemzimbeni, le yindawo, apho ujonga khona ngokulula kwiincwadi ezihleli kufutshane neziko elishushu. I-hammock itsala i-nap, ngelixa i-terrace kunye ne-pier itsalela ikofu yakho.
I-Sasek Wielki lelona chibi likhulu kwindawo yedolophu yaseSzczytno. Ubunzulu obuphakathi yi-8,1 m ngelixa kweyona ndawo inzulu yehla ukuya kuma-38m. Ubude bayo yi-12,45 km. Kukho iziqithi ezibini echibini. Kwichibi ngokwalo nakunxweme lwalo indawo yokuthula iyanyanzeleka. I-Sasek Wielki yintlanzi emhlophe, uya kufumana iibreams, roaches, pikes kunye neeperches ubukhulu becala.
Ihlathi elingqongileyo likhaya lezilwanyana ezahlukahlukeneyo. Uya kukwazi ukujongana nemihlambi yamaxhama kunye neebhadi. Echibini kunye nonxweme lwalo kukho iintaka ezininzi, ngokuhlwa ii-cranes kulula ukuva kufuphi.
Ngelixa uhleli endlwini, unokudlala imidlalo yebhodi - uya kufumana isitokhwe esigcweleyo kwigumbi lokuhlala. Ithala leencwadi lasekhaya, elikwanezinto ezithile ngesiNgesi, lilindele iintshulube ezilandelayo.
Phezulu, kukho amagumbi okulala ama-3. Enye iphindwe kabini, i-180 cm ibhedi ebanzi, ekwaziyo ukongeza ngokulula ibhedi yesithathu ekumgangatho omnye. Eyesibini iphindwe kabini, ibhedi ebanzi ye-180 cm, kunye nebhedi yesithathu eyongeziweyo ngokulula. Igumbi lokulala lesithathu lincinci.
Kwabo bahendelwa ukuba bachithe ixesha kwiqela elikhulu, sisebenzisa iisofa ezisezantsi eziguqulwa zibe ziibhedi ezimbini ezitofotofo, nto leyo enokwenzeka ukuba abanye abantu aba-4 balale.
Unokuchitha ubusuku kwi-hammock okanye ententeni egadini, yonke into ixhomekeke kuwe!
Ngaphandle kwamagumbi okulala amathathu aphezulu, ezantsi uya kufumana ikhitshi elinegumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela kunye neholo. Ikhitshi lixhotyiswe ngezixhobo zombane ezifana nefriji eneminyango emibini, umatshini wekofu, isitovu, i-oveni, i-oveni ye-microvawe, i-dishwasher kunye nezinye izinto ezincinci ezifana ne-toaster, i-mixer kunye ne-blender. Uya kuzifumana ukhululekile xa ulungiselela iqela elikhulu labantu abanokuyingcamla behleli ecaleni kwetafile endala engqukuva ye-oki eguqulwa ngokulula ibe yioval ukuba iyafuneka.
Ngeentsuku ezipholileyo uya kuzifudumeza ecaleni kwendawo yomlilo elele phantsi kwiisofa zegumbi lokuhlala.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngesomisi esinamandla seenwele - akukho mfuneko yokuzisa eyakho.
Nangona isomisi seenwele, kukho indawo yokomisa iimpahla, ibhodi yoku-ayina kunye nentsimbi - izinto zeentsuku ezinkulu. Iphenyane kunye nesikhephe esibhexwayo zibotshelelwe kwindawo eyi-20m away okanye zibekwe egadini – ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka nemozulu. Nokuba zisegadini kwaye uziva ngathi ubheqa nekhephu ebusweni bakho, ukhululekile ukuba uthathe isikhephe usise echibini :-)
Sithanda izilwanyana ngokupheleleyo kwaye sikumema kunye nabo. Kwabo basebenzisa i-kennel cage yonke imihla sinikezela ngeyethu. Inkulu kwaye iqinile.
Indawo ibiyelwe, ngoko ke ikhuselekile kubabaleki bakho abanemilenze emibini okanye ngaphezulu.
Ngaphandle kwendlu, kwindawo kukho ujingi - oko kulungiselelwe abo bangakhathazwanga kukugula okushukumayo; Uthatha iinkuni zendawo yomlilo ukusuka apho kwaye ubeke inkunkuma ehleliweyo ngaphakathi xa isithuba esingaphantsi kwesinki singonelanga :-)
Amanzi etephu awaselwa, nangona kunjalo ukuthatha ishawa, ukuxukuxa amazinyo kunye nokuhlamba nantoni na usebenzisa amanzi ethu aphuma kwiimpompo kukhuselekile kwimpilo nobomi bakho. Sibonelela ngesitokhwe seembiza zamanzi okusela.
Nangona kukho indawo yomlilo, i-100% yanele ukufudumeza indlu, unokusebenzisa iziko le-oyile yaseJapan elawulwa ngombane. Kunokwenzeka ukuseta ubushushu kwaye iziko liya kwenza konke okusemandleni abo ukukugcina ushushu ngamaxesha onke.
Sibonelela ngelinen yokulala, iitawuli, iphepha langasese, isepha, ishampu kunye nejeli yokuhlamba. Izinto zokuthambisa zikwiipakethe zeglasi eziphinda zisetyenziswe, senza kangangoko ukuba singangcolisi indalo esingqongileyo. Ukuthuthuzela kwakho kunye nelinen yebhedi ekhuselekileyo kunye neetawuli zihlanjwa kumaqondo aphezulu. Ngaphambi kokutyelela kwakho indlu i-ozonated.
Ukufikelela kwinethiwekhi yeselula kulungile kakhulu, iWiFi ilungile. Unokubukela uthotho oluthile kwiNetflix okanye usebenze kwi-intanethi.
Eyona lali ikufutshane ikumgama oyi-1km, ungahamba apho ngaselunxwemeni lwechibi. Iivenkile kunye neemarike zifumaneka eSzczytno – idolophu ekumgama weekhilomitha ezili-10. Ukuya kumbindi weWarsaw kukho iikhilomitha ezili-180. Isikhululo seenqwelomoya saseOlsztyn-Mazury – iikhilomitha ezingama-20.
Ekubeni indlu itholakala ehlathini, i-2 km yokugqibela kuya kufuneka uhambe kwindlela yegrabile kunye nehlathi elihlala linzima ngokwaneleyo kwimoto eqhelekileyo. Ukuba bekungenjalo singakuthwala.
Kutyelelo lwakho into eyothusayo iya kuba ikulindile. Ngethemba uya kuyifumana ilungile :-)
Senza konke okusemandleni ethu ukwenza uzive ukhululekile kwindawo yethu, nangona kunjalo, kuya kufuneka uqaphele ukuba ayisiyiyo ihotele yeenkwenkwezi ezi-5 kwaye uya kubuyela ekhaya ivumba lendawo yomlilo kunye nendlu yehlathi ezimpahleni zakho 
Umbuki zindwendwe ngu- Klementyna
I'm an active person, love running, everywhere I am I'm looking for best trails. I also climb, ride a bike, swim, ski, snowboard do cross and back country skiing and lots more.
Working as air traffic controller.
Living among lakes and forests.
I'm an active person, love running, everywhere I am I'm looking for best trails. I also climb, ride a bike, swim, ski, snowboard do cross and back country skiing and lots more…
Iilwimi: English, Français, Polski, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Szczytno